AdBlocker maka gam akporo: ndakọrịta na ngwa kachasị mma | Androidsis
AdBlocker maka gam akporo: ndakọrịta na ngwa kachasị mma
AdBlocker bụ ngwa nke ọtụtụ ndị ọrụ na -echekwa na android ha maara ma ọ bụ na-ejila. Ihe mgbochi mgbasa ozi na-enye anyị ohere ịkwụsị igosipụta mgbasa ozi na ibe weebụ anyị gara na ihe nchọgharị. Daalụ maka ya anyị nwere ike nweta ụzọ igodo dị mfe karịa na enweghị ndọpụ uche na ibe weebụ ndị ahụ.
Ihe a na -ahụkarị bụ na anyị na -eji ihe mkpọchi mgbasa ozi a na ihe nchọgharị na PC anyị, na -abụkarị n'ụdị ndọtị. Agbanyeghị na ọtụtụ mmadụ ha chọkwara inwe ike iji AdBlocker na ekwentị mkpanaaka ha Android, ma ha amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dakọtara ma ọ bụ ihe kasị mma ngwa anyị nwere ike iji gbochie mgbasa ozi na ekwentị. Mgbe ahụ anyị ga -ahapụrụ gị azịza niile ịchọrọ na nke a.
1 Ọ ga -ekwe omume iji AdBlocker na gam akporo?
2.1 Adblocker Browser Free
2.3 Nchọgharị Obi Ike
2.4 Ihe mgbochi AdGuard
Ọ ga -ekwe omume iji AdBlocker na gam akporo?
Otu n'ime obi abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ bụ enwere ike iji AdBlocker ma ọ bụ ihe yiri ya na ekwentị gam akporo. Azịza ya bụ ee. Enwere ndị na -egbochi mgbasa ozi anyị nwere ike ibudata na ekwentị anyị, nke mere na mgbe anyị na -eme nchọgharị na ịntanetị, ha ga -akwụsị igosi mgbasa ozi ndị ahụ na -akpasu iwe nke anyị na -ahụ n'ọtụtụ ibe weebụ anyị na -eleta. N'ime ha anyị na -ahụ AdBlocker n'onwe ya, yana nhọrọ ndị ọzọ.
Na ihe nchọgharị dị na PC anyị, a na-ebudata ihe mgbochi mgbasa ozi a n'ụdị ndọtị, nke etinyere na ihe nchọgharị n'onwe ya. Na ekwentị anyị anyị ga -ebudata ngwa, nke ga -emezu otu ọrụ anyị nwere na ndị na -egbochi mgbasa ozi anyị na -eji na kọmpụta, naanị na ọ na -arụ ọrụ dị ka ngwa nọọrọ onwe ya na ekwentị. Ọ ga -egbochi mgbasa ozi (ụdị niile) nke egosiri na ibe weebụ anyị na -eleta. Dabere na ngwa anyị na-ebudata, anyị ga-enwe ike ịnweta usoro ọrụ ndị ọzọ n'ihe gbasara igbochi mgbasa ozi.
Ụfọdụ na -eche ọ bụrụ na ọ bara uru n'ezie ma ọ bụ ọ bara uru iji AdBlocker na gam akporo. Nke bụ eziokwu bụ na anyị na -ahụ ọtụtụ mgbasa ozi mgbe anyị na -eme nchọgharị, nke na -emekarị ka ọ ghara iru ala ịnyagharịa na ibe ndị ahụ. Ihe mgbochi mgbasa ozi a na-enyere anyị aka inwe ahụmịhe ka mma, si otú a na-enye nchọgharị na-enweghị ihe ndọpụ uche ma ọ bụ iwe, yana bụrụkwa ụzọ isi kpuchido nzuzo anyị. Na mgbakwunye, anyị nwere obi ụtọ ugbu a na enwere ihe nchọgharị nwerelarị ihe mgbochi mgbasa ozi nke ha, ihe na-enyekwara aka na ahụmịhe nchọgharị ahụ ka mma. Yabụ na anyị nwere nhọrọ ole na ole dị.
Ọ bụrụ na i meela mkpebi iji ụfọdụ ihe mgbochi mgbasa ozi maka ekwentị gam akporo gị, ị ga -ahụ na n'ime Storelọ Ahịa Play anyị na -ahụ nhọrọ ole na ole dị na nke a. Mgbe ahụ, anyị na -ahapụrụ gị nhọrọ nke ihe mgbochi kachasị mma anyị nwere ike ibudata na ekwentị anyị. Ha bụ nhọrọ dị mma, yana ezigbo ọkwa, nke ahụ ga -esokwa ma a bịa na igbochi mgbasa ozi yana inye anyị ihe nchọgharị onwe anyị na ekwentị mkpanaka ma ọ bụ mbadamba Android anyị.
Nhọrọ mbụ bụ AdBlocker maka gam akporo n'onwe ya. Ọ bụ ihe na -egbochi mgbasa ozi na -ewu ewu na Storelọ Ahịa Play, nke nwekwara ezigbo ọkwa site n'aka ndị ọrụ. Ọ bụ nhọrọ dị irè mgbe niile ga -enyere anyị aka igbochi mgbasa ozi ndị ahụ na -akpasu iwe mgbe anyị na -eme nchọgharị. Ọ bụ ihe mgbochi na-emegide ụdị mgbasa ozi niile na weebụ: vidiyo, mgbasa ozi na-ekpuchi ọdịnaya, ọkọlọtọ n'elu ma ọ bụ n'akụkụ ibe weebụ ma ọ bụ mmapụta dị iche iche.
Ọ na-emekwa dị ka ezigbo ngwa nzuzo mgbe ị na -eme nchọgharị, na -egbochi igosipụta mgbasa ozi ahaziri iche dabere na ọdịnaya ahụ ma ọ bụ ibe weebụ nke anyị gara na ihe nchọgharị n'ime ekwentị. Ọ bụ mgbakwunye nchekwa agbakwunyere nke na -enye ohere nchọgharị ka mma maka ndị ọrụ gam akporo. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ nhọrọ a na-ewu ewu na ahịa.
AdBlocker maka gam akporo nwere ike ịbụ budata n'efu na Storelọ Ahịa Play. Ihe mgbochi mgbasa ozi a nwere ụdị akwụ ụgwọ nke na -enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ n'ime ya, mana anyị nwere ike iji ụdị efu na -enweghị nsogbu igbochi mgbasa ozi ndị ahụ na ekwentị. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
AdBlock Plus bụ ihe ọzọ Ihe mgbochi mgbasa ozi kacha ewu ewu maka gam akporo Site n'ahịa. Nke a bụ ụdị maka ekwentị nke ihe mkpọchi ihe nchọgharị ama ama, yabụ ọ bụrụ na ijiri nke ahụ na kọmpụta gị, ụdị a agaghị eweta ihe ịtụnanya ọ bụla. Anyị na -ahụ otu ọrụ na ụdị a maka ekwentị gam akporo. Ebumnuche ahụ ka bụ otu: igbochi mgbasa ozi na -akpasu iwe mgbe ị na -eme nchọgharị.
Ngwa a na -enye anyị ohere ịnweta faịlụ na-egbochi mgbasa ozi na-akpaghị aka. Na mgbakwunye, ọ nwere ikike iji gbanyụọ nsuso mgbasa ozi na ihe nchọgharị ekwentị mkpanaaka. Ọ na-ezochikwa bọtịnụ iji kesaa ọdịnaya na netwọk mmekọrịta ma na-enye onye ọrụ ohere ịchọgharị onwe ya na ekwentị. Nhazi nke mgbasa ozi mgbasa ozi a dị mfe n'ezie, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere iji ya na mkpanaka ha ma na-enyere aka na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ gam akporo.
AdBlock Plus dị na Google Play Store, ebe anyị nwere ike ibudata ya n'efu. Na mgbakwunye, onye na -egbochi mgbasa ozi a enweghị ụdị ịzụrụ n'ime ya, ka anyị wee nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ ya niile na ekwentị anyị. Ị nwere ike ibudata ya na mkpanaka gị site na njikọ a:
ABP maka Samsung ịntanetị
Developer: eyemb GmbH
Brave bụ ihe nchọgharị maka gam akporo na-enweta ọkwa n'ahịa. Otu n'ime njiri mara nke a ihe nchọgharị bụ na o nwere ihe mgbochi mkpọchi arụnyere n'ime ya. Echiche dị n'azụ ihe nchọgharị a bụ inye ndị ọrụ ihe nchọgharị dị mma, nkeonwe yana nke mgbasa ozi anaghị akwụ ụgwọ oge niile. Yabụ, a na -egosi ya dị ka ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị dịkwa njikere ịnwale ihe nchọgharị dị iche karịa nke anyị na -ejikarị eme ya wee nwee ahụmịhe dị iche mgbe ị na -eme nchọgharị.
Ihe nchọgharị a dị na gam akporo ga-enye anyị ohere ịnyagharịa na-enwetaghị data nkeonwe anyị na webụsaịtị ndị ahụ anyị gara. Ọ ga -egbochi mgbasa ozi niile na -egosi na ibe weebụ, gụnyere mgbasa ozi nsuso, dịka ọmụmaatụ. Na mgbakwunye, ọ na -enye anyị ohere ịchekwa ike oge niile mgbe anyị na -eme nchọgharị, ekele maka igbochi mgbasa ozi agbakwunyere n'ime ya. Ụlọ ọrụ dị n'azụ ya na-eme ka ihe mgbochi a na-emelite mgbe niile, nke mere na a na-egbochi ụdị mgbasa ozi ọhụrụ ma ọ bụ mmapụta ọhụrụ nke na-apụta na oge ma si otú a na-emezu nkwa ya nke nchọgharị na-enweghị mgbasa ozi. N'ihi ya, a na -ekwe nkwa ịnyagharịa nke ọma.
Brave bụ ihe nchọgharị na -enweta ọtụtụ ọnụnọ n'etiti ndị ọrụ gam akporo. Ọ bụ nhọrọ dịtụ iche na ndepụta AdBlocker maka gam akporo, mana ọ bụ nhọrọ dị mma ịtụle. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe nchọgharị nke na -echebe ihe niile na nzuzo na nchekwa mgbe anyị na -eme nchọgharị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya, ị nwere ike ibudata Brave n'efu na ekwentị gam akporo gị site na Play Store ozugbo site na njikọ a:
Obere ihe nchọgharị weebụ nkeonwe
Ihe mgbochi AdGuard
Nhọrọ ọzọ na ndepụta AdBlocker maka gam akporo bụ ngwa amaara ọtụtụ ndị ọrụ, nke nwere ezigbo ọkwa na Storelọ Ahịa Play. Ọ bụ ihe mgbochi mgbasa ozi na-arụ ọrụ naanị ya Ihe nchọgharị Yandex na ihe nchọgharị ịntanetị Samsung mkpanaka. Dị ka ọ dị na ngwa ndị ọzọ dị na ndepụta a, emebere ya igbochi mgbasa ozi na -apụta mgbe anyị na -eme nchọgharị na ekwentị anyị. Ọ bụ nhọrọ pere mpe karịa n'ihe gbasara ndakọrịta na ihe nchọgharị, mana ọ na -arụ ọrụ nke ọma n'ihe gbasara ọrụ, dịka ọmụmaatụ, na -eme ya nhọrọ ọzọ ịtụle.
Otu n'ime ọrụ ama ama ma ọ bụ nke ama ama na AdGuard Content Blocker bụ na ọ na-enye anyị ohere ime ya mepụta ndepụta nke ibe ebe anyị chọrọ igbochi mgbasa ozi, yana ndepụta nke ndị ọzọ ebe anyị na -anabata mgbasa ozi ndị ahụ. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ụdị nzacha ma ọ bụ ndepụta ọ bụla dabere na ụdị mgbasa ozi anyị na-ahụ na ibe weebụ, dịka ọmụmaatụ, ka o wee gbochie mgbasa ozi ndị ahụ nke ọma. Na blocker anyị na-ahụ usoro nke ndepụta dịnụ nke e kere site na obodo n'onwe ya, ihe dị nnọọ adaba, ma anyị nwekwara ike ịmepụta ndepụta nke onwe anyị. Na mgbakwunye, ọ ga -ekwe omume ịmepụta nzacha nke anyị. N'ihi nke a ị nwere ike nweta mgbochi mgbasa ozi nke na-akacha mma mgbe niile.
Ọ bụ ihe mgbochi mgbasa ozi ogologo oge nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụ aro, gụnyere ụlọ ọrụ nchekwa dị ka Avast, yabụ na ọ bụ ihe a ga-atụlekwa. Agbanyeghị na ndakọrịta ya pere mpe, a na -egosi ya dịka onye na -egbochi mgbasa ozi na -enye nhọrọ nke anyị enweghị na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya, anyị nwere ike ibudata ya n'efu na ekwentị anyị sitere na Play Store, dị na njikọ a:
Developer: AdGuard Software Ogwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » AdBlocker maka gam akporo: ndakọrịta na ngwa kachasị mma